I-ITIL Certification Opportunities - ITS Tech School
I-ITIL Certification Opportunities Career
Ukuba nesitifiketi se-ITIL ngaphansi kwemikhono yakho kuyisizo esikhulu emsebenzini wakho. Akugcini nje ukuthuthukisa amathuba okuba nomsebenzi othembekile. Ukuba isipho esiyinhloko ekubuyiseleni kwakho, kunika ukuqonda kumphathi ozayo ohambelana nokubiza komuntu kokufunda ku-IT Service Management.
Inkampani ngayinye ebhizinisini, enesiphakamiso esihlukile, ihamba ngokunikeza ukusekela okuhle kunazo zonke zabathengi bazo. Ngokufanayo kuyisivivinyo namuhla, inkulu kakhulu inhlangano, iningi liyivivinyo ababhekene nalo emakethe futhi okuvelele kakhulu ukunyakaza kwabo ukulwa nemiphumela yokuhlolwa ngalunye. Izwe eligijimela ekulindeni, izinhlangano zomphakathi, kungaba okuncane noma okukhulu ekugcineni kuhlangene nezikhathi ezinhle nezimbi emakethe. Ukuze ubhekane nazo zonke izinkinga indlela ehlakaniphile kakhulu yokubhekana nebhizinisi ukugxila ekufezeni okuhlangenwe nakho, kusukela manje kuze kube yilapho kuqeda izinkinga zemiphumela enkulu. Ngokuqoqa i-Hang etholakalayo yezakhi ze-Small Business zibheke phambili ekubambeni okukhulu kwezinhlangano ezinkulu.
Kunconywa izakhi ezahlukene:
Izinhlangano eziningi namuhla zithembele emisha. Ukwandiswa kwe-perky yakamuva kakhulu yisakhiwo se-ITIL. Izinqubo ezithathwe ngemuva kwesakhiwo se-ITIL kusiza inhlangano ukuba ihambise isithunzi sayo esihlobene nemali. I-ITIL emisha isiphelile ekukhiqizeni kakhulu, bese iphakamisa intshisekelo kubachwepheshe be-ITIL. Ukuqeqeshwa kwe-ITIL kunikeza ulwazi oluphezulu kuya phansi lwe-ITSM kulabo abazobhapathizwa, okwenza kube yilapho bebheke kakhulu emva kokusondela kwenhlangano. I-ITIL ilungiselele ukusebenza ngokusebenzayo ayinikezwa nje isitifiketi esihle kakhulu ekukhokheni kodwa ngesikhathi esifanayo isetshenziswa izingxenye ezinamandla ebhizinisini. Inani elikhulu lezinto zebhizinisi nxazonke liye lasekela i-ITIL. Izinhlangano ezifana ne-Boeing, i-Hewlett-Packard, i-IBM, i-Microsoft, i-Pfizer, iToyota, i-Walmart, i-NASA Disneyland kanye nezinye izinto eziningi ezamukele i-ITIL. Izinhlangano ezisebenzisa isikhangiso se-ITIL esiqinisekisiwe sikwazi ukufaneleka nokwanela kokubili kwezinqubo ezikhona nezindlela ezintsha zezinhlelo zabo nezisekelo.
Amathuba angcono uJobe:
Ukuqeqeshwa kwe-ITIL kungukuthi wonke ama-akhawunti afana nethuluzi lokucabangela elivula indlela yesikhathi esizayo esicacile. Ochwepheshe batshalwe imali Ukuqeqeshwa kwe-ITIL bathola okungaphezu kwalezo eziqinisekisiwe ngezigaba ezahlukene. Inikeza ukudla okuyingxenye ephakeme nokukhushulwa kubantu abakhona manje emkhakheni wezinsizakalo ze-IT. IFOR isitifiketi ithuthukisa abacebisi be-IT kanye nabachwepheshe be-ITSM ithuba lokuthuthukisa ingxenye yabo futhi ngokuqhubekayo kubonisa ukuthi kunenzuzo kulawo mabhizinisi ebandakanya izinhlangano ze-IT nezinkonzo ze-IT.
Ochwepheshe abathintekayo ekulawulweni kwezinsizakalo ze-IT, Ukuphathwa Kwephrojekthi, Izinsizakalo Zezinsizakalo kanye Nemiklamo Yezinsizakalo namasu okusizakala kakhulu okuvela kwisitifiketi se-ITIL. Ngaphandle kwalezi Abafundi abaqinisekisiwe be-ITIL bangazama izandla njengabaphenyi bokuhambisa ukuphathwa kwe-IT, onjiniyela bokusekela, ukusekelwa kwezobuchwepheshe nokusiza abanikazi bama desk. Ukuqeqesha ku-ITIL kunika umuntu ukuthi azakhele kabusha ukuthuthukiswa kwamuva emisha futhi amsekele ngekhono lokubhekana nezinkinga zasensimini.
An Isitifiketi se-ITIL kusiza indoda ukuba ingezelele ekuqaliseni okuqhubekayo futhi ivuselele izinkinga zakhe ukuze kube nomsebenzi ophakeme kakhulu. Njengoba izinhlangano ezikhathini zanamuhla zekhompyutha seziqalile ukuhlanganisa izakhiwo zazo nomqondo we-ITIL, zidingekile kakhulu Ochwepheshe be-ITIL abaqinisekisiwe. Akuyona ukuphazamisa ukutshela ukuthi maduzane kunokuba kamuva, ezingenakutholakala kwizicelo eziqhubekayo zokuthuthukisa ezintsha, Isitifiketi se-ITIL kungase kuphele ngokusobala ukuthi abantu abafuna ukwenza okhethekile ngokwabo kwibhizinisi le-IT.
Lapha ibhulogi ehlobene mayelana Umhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo se-ITIL isitifiketi
I-ITIL Certification - Umhlahlandlela ophelele
Umbuzo wesampuli nezimpendulo ze-ITIL Exam 2017